I-LinkedIn iyinethiwekhi yokuxhumana ephezulu yabasebenzi be-B2B emhlabeni futhi, ngokusobala, isiteshi esihle kunazo zonke sabathengisi be-B2B ukusabalalisa nokukhuthaza okuqukethwe. I-LinkedIn manje inamalungu angaphezu kwesigidigidi sezigidi, anabagqugquzeli abasezingeni eliphakeme abangaphezu kwezigidi ezingama-60. Akungabazeki ukuthi ikhasimende lakho elilandelayo liku-LinkedIn… kumane nje kuyindaba yokuthi ubathola kanjani, uxhumane nabo, futhi unikeze imininingwane eyanele ukuthi babona inani kumkhiqizo noma kusevisi yakho.
Ngabe uqaphele ukuthi angizange ngiyiqambe le ndatshana ukuthi Ungayishayela Kanjani Imholi Engaphezulu nge LinkedIn? Lokho kungenxa yokuthi ukulinganiselwa kwe-LinkedIn kwenza kube nzima ukuthola ifayili le- ochwepheshe bezokuthengisa ukusebenzisa ngokugcwele ipulatifomu yokucwaninga nokuhlonza ithemba labo elilandelayo. Unqunyelwe ukuthi mingaki imilayezo ongayithumela inyanga ngayinye, ukuthi ingaki imikhondo ongayigcina, awukwazi ukukhomba ukuthi ngubani obuke iphrofayili yakho, awunakho ukufinyelela kuzo zonke izinto ezitholakalayo ukuseshwa, futhi awunakho ukufinyelela kumathemba angaphandle kwenethiwekhi yakho esheshayo.
Kukhona igama esilisebenzisayo ku-LinkedIn lapho sixhuma nothile futhi sishaywa masinyane ngomyalezo wokuthengisa ongenayo, oyisihluthulelo… I-Pitchslapped. Anginasiqiniseko sokuthi ngubani oqhamuke naleli gama, kepha impela kulitshe. Kufana nokuvula umnyango wakho wangaphambili bese umthengisi ngokushesha angene emnyango bese eqala ukuzama ukukuthengisa. Ngithi "zama" ngoba ukuthengisa kwezenhlalo akuhlangene nakancane nokuphosa, kumayelana nokwakha ubuhlobo nokunikeza inani.
Sebenzisa okufushane: Noma yini engaphezu kwemisho engu-5-6 ithambekele ekubhekaneni ne-LinkedIn, ikakhulukazi uma ubuka kuselula. Tshela umuntu ongaba iklayenti lakho ukuthi ungakwenza kanjani impilo yabo ibe ngcono ngamagama ambalwa ngangokunokwenzeka. Imiyalezo eminingi esebenza kahle kaCleverly yimisho engu-1-3.
Nikeza ngobufakazi bezenhlaloUkuthambekela kokuqala kwethemba ukungakholelwa kuwe. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi noma iliphi igama lilahle amaklayenti abonakalayo, usho imiphumela ethile oyitholile, noma ukhombe ezifundweni zamacala angempela.
Yonke imizamo yokuthengisa eqondile idinga ukuthintwa okuningi ukuze kudlulele kulokho okulindelwe. Amathemba akho amatasa, kungenzeka ukuthi awanaso isabelomali, noma kungenzeka ukuthi awacabangi nokuthola umkhiqizo noma insiza yakho. Kungakho kubalulekile ukuthi ube nohlelo lokulandelela oluhambisanayo, oluhamba kahle. Uma usuxhumeke kuwe, ithemba liba uxhumano lwe-1st-degree, futhi likunethiwekhi yakho ingunaphakade, ngakho-ke ubondla ngokulandela nokuqukethwe.
Uma lokhu kuzwakala kunzima, ungahle uthande ukuqhubeka nokusebenzisa Ngobuhlakani. I-Cleverly ineqembu layo kanye neplatifomu lapho ihlangana khona namathemba akho egameni lakho bese icindezela umkhondo ebhokisini lemilayezo engenayo labamele lapho bengasebenzela ukuwavala. Lokhu kuvumela abathengisi bakho ukuthi benze lokho abakwenzayo kahle… bethengisa. Shiya ifayela le- ukuthengisa komphakathi Ngobuhlakani!
Ipulatifomu yeCleverly ihlangana ne-LinkedIn ukukunikeza indlela engcono yokuphatha, yokulandela umkhondo, kanye nokuphendula kumathemba - kufaka phakathi izifanekiso zokuchofoza nokuthumela ukukusindisa amahora uphendula.